Umoya ococekileyo! (Igumbi eliluhlaza) - I-Airbnb
Umoya ococekileyo! (Igumbi eliluhlaza)
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguGazmend
Ibekwe ezantsi kumbindi wentlambo (Iincopho zeBalkan), ijikelezwe ziintaba ezingama-360 degrees, igumbi lineefestile ezimbini, ngalinye linombono ongcono kunomnye, linokukhanya okuninzi kwendalo. Indlu ibekwe kwindawo ezolileyo kodwa entywiliselweyo egcwele indalo, unokuva isandi somlambo odlulayo, ukuntyiloza kweentaka, amagqabi avuthuzayo, njl.njl. Igumbi likumgama ongama-200m kuphela ukusuka kwimithombo yamanzi e-4 yendalo, nganye inobuhle bayo kwaye amanzi okusela anencasa!
Ipatio ye-onsite ijonge uluhlu olubanzi lweentaba apho unokuodola iziselo okanye ukutya ukonwabela iimbono.
1 ibhedi elala abantu ababini, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1
Ngelishwa azikho iivenkile okanye iindawo zekofu kumgama wokuhamba (eyona ikufutshane yi-3.5km kude) kodwa sinawo umatshini we-espresso, iti, zonke iintlobo zamandongomane, iziqhamo, amanzi, iziselo, njl.njl kwisiza.
Umbuki zindwendwe ngu- Gazmend
Kuhlala kukho umntu apha, nokuba ndim okanye abazali bam sonke sithetha iilwimi ezi-5 ezahlukeneyo kwaye sinobuhlobo kakhulu! Iisandwich, isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa sinokuodolwa kwi-omsite ukutya kuphekwe kwindawo kunye nokutya okuphilayo.
Kuhlala kukho umntu apha, nokuba ndim okanye abazali bam sonke sithetha iilwimi ezi-5 ezahlukeneyo kwaye sinobuhlobo kakhulu! Iisandwich, isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nes…
Iilwimi: English, Italiano, Русский, Español